Indlu kaMalume uJosh esecaleni komlambo - I-Airbnb
Indlu kaMalume uJosh esecaleni komlambo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKiya
Ukurenta kwikhabhathi yaseWaterfront kumlanjana omkhulu wembali weWill, ngaphakathi kwemizuzu emi-5 yokuqhuba kwe-3 eyongezelelweyo yesitokhwe se-PA esivunyiweyo samanzi etrout; Brushcreek, Shaffers Run kunye neWill encinci. Ngqo ibekwe ngaphakathi PA State umhlaba umdlalo #104, kunye 8,182 iihektare yolonwabo olusulungekileyo ngaphandle! Ifakwe ecaleni kukaloliwe we-csx kunye netonela ye-Falls Cut kumgama wokuhamba. Kukho iqonga elinemibono egqibeleleyo yeengoma. I-Wills Creek igqwesileyo kwi-kayaking ngokunjalo. Simi kumbindi phakathi kweSomerset, Pa kunye neCumberland, Md
Indawo epholileyo ye-450sq yeenyawo ikhabhathi ebekwe ngokuthe ngqo kumlambo! Vula iplani yomgangatho kunye negumbi lokulala eli-1 kunye nesayizi epheleleyo yokutsala isofa. I-gazebo ifakwe kwidekhi, ilungele isidlo sasemini sokuphumla. Ipavilion inendawo yomlilo kunye nedekhi enabela ngasemanzini. Isiphelo esigqibeleleyo sosuku lwakho!
Ekuphela kwenkonzo yeseli yiVerizon/cdma
Akukho fowuni yasekhaya okanye i-wifi ekhoyo!
IFairhope yiparadesi yangaphandle! Thina ngqo ngaphakathi Pa State gamelands #104. Kukho ngaphezu kweehektare ezingama-8100 kuko konke ukuzingela kunye nokuhamba intaba onokuthi uphuphe ngako. IGamelands #48 nayo ikufutshane kakhulu. Kukho ibha / indawo yokutyela eyi-1.5 yeemayile ukusuka kwikhabhini. Siyimizuzu engama-30 ukusuka kwisikhumbuzo seFlight 93. Kwakhona 30 imizuzu ukuya zembali Cumberland, MD kunye Bedford, PA
Umbuki zindwendwe ngu- Kiya
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Fairhope